Qaybta wadooyinka tareenka ee dhoofinta dhoofintu way sii kordhayaan sababta oo ah coronavirus | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraQaybta wadooyinka tareenka ee dhoofinta dhoofintu way sii kordhayaan sababta oo ah coronavirus
23 / 03 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Turkey sii hawsheeda ee 190, waxaa bilowday diirada u dhoofiyo oo ah $ 2020 bilyan oo ah. Qaybta tareenka ayaa kordhin doonta dhoofinta dhoofinta ka dhanka ah cudurka loo yaqaan 'coronavirus', kaas oo saameeya adduunka. Lix duulimaad ayaa lagu dari doonaa wadada tareenka ee Baku-Tbilisi-Kars.
Coronavirus saameeya Show ee Shiinaha ee wax soo saarka iyo ganacsiga shisheeye Ujrooryinka focus on dhinacyada togan iyo kuwa taban oo ay dhoofinta dalka Turkiga. Iyada oo la xirayo inta badan irdaha kastamka sababta oo ah coronavirus, dhoofiyeyaasha Turkiga ayaa waliba abuuri doona jidad kale. Qaybta tareenka ee dhoofinta ayaa la kordhin doonaa. Lix duulimaad ayaa lagu dari doonaa wadada tareenka ee Baku-Tbilisi-Kars.
FADLAN UMA SAMEEYA SECTOR
Turkey ayaa kordhay dhammaan tallaabooyinka ay sabab u tahay cudurka dillaacay of Covidien-19. Tallaabooyin cusub ayaa maalin kasta la soo bandhigayaa xagga ganacsiga. Taasoo diirada u dhoofiyo oo ah $ 2020 bilyan sannadka 190. Turkey, carqalad ku ah dhoofinta sabab u dillaaco ee qaadashada tallaabooyin ka hortag meel. Xaaladda guud, jidad kale ayaa loo go'aamin doonaa dhoofinta alaabada dhoofinta si loo hubiyo in dhoofinta aan la joojin.
7 Tababar ku saabsan BAKU-TBILISI-KARS LINE
Wadooyinka kale ee la go'aamiyo, saamiyada wadooyinka tareenka ayaa la kordhin doonaa. Gaadiidka tareenka wuxuu bixiyaa faa'iidooyin gaadiid iyo shixnad waqti aad uga yar marka loo eego noocyada kale ee gaadiidka. Xilligan, 1 tareen ayaa ku socda khadka tareenka ee Baku-Tbilisi-Kars. Iyada oo la kaashanayo Wasaaradda Ganacsiga iyo Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, awoodda qadka Baku-Tbilisi-Kars ayaa la kordhin doonaa 7 tareen. (Source: New Dawn)
BTSO Saadka. Waxay bixisaa Xawaaraha iyo Faa'iidada Qiimaha ee Dhoofinta
Qaybta asfalttu ma kacdaa
Isqorka Nidaamka Isgaadhsiinta ee Gaadiidka Bulshada ee 72 Boqolkiiba